Madaxweynaha Soomaaliya oo Kigali kula kulmay dhigiisa Masar – STAR FM SOMALIA
Kulanka Labada madaxweyne ayaa dhacay inta lagu guda jiray shir madaxeedka Midowga Afrika ee shalay ka furmay Kigali.
Madaxweynaha Masar Al-Sisi ayaa sheegay inay ka qeyb qaadanayaan soo celinta xasiloonida Soomaaliya, isla markaana ay dowladda ku gacan siinayaan sugida amniga iyo taageerida hey’adaha dowladda.
Sidoo kale Madaxweynaha Masar C/fitaax Al-Sisi ayaa dhigiisa Soomaaliya u xaqiijiyay in ay sii wadayaan taageerada dhinac kasta leh oo lagu horumarinaayo Soomaaliya sida uu xaqiijiyay afhayeenka madaxtooyada Masar Calaa Yuusuf.Calaa Yuusf.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Masar ku bogaadiyay taageerada iyo garab istaaga Soomaaliya, caawimaada farsamo oo Masar ay siiso Soomaaliya.
Waxaa kaloo lagu wadaa in madaxweynaha uu la kulmo Madax kala duwan ee ka qeyb galeysa shirka Midowga Afrika.